Midika Ho Sakafo Miavaka Sy Matsiro Ny Fetin’ny Krismasy Ho an’ny Latino-Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Midika Ho Sakafo Miavaka Sy Matsiro Ny Fetin'ny Krismasy Ho an'ny Latino-Amerikana
Voadika ny 02 Janoary 2017 13:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, عربي, Italiano, українська, English
buñuelos kôlômbiana. Sary nalain'i Cristina Valencia, nozaraina tao amin'ny Flickr nampiasànba lisansa Creative Commons.
Satria ankalazaina manerana an'i Amerika Latina ny Krismasy, dia miara-misakafo ny fianakaviana sy ny namana ny hariva mialoha ny Krismasy. Midika izany fa miara-mahandro ilay sakafo mahazatra izay fihinana amin'io hariva miavaka io amin'ny fomba nenti-paharazana ihany koa ry zareo. Fanehoana velona ny tantara sy ny fahasamihafàna ara-kolontsain'ny any amin'ny faritra ihany koa ny sakafo Krismasy. Misy ireo sakafo nentin'ireo mpifindra monina ary lasa fomban-drazana, misy ihany koa ireo hafa, fanafangaroana sakafo izay mampiseho ny fahasamihafan'ny foko any Amerika Latina.
Tena miavaka ny sasany amin'ny sakafo fanao amin'ny fety, ary maro amin'izy ireo no fanindriana totozy fotsiny dia azo (karohina amin'ny aterineto), raha liana amin'ilay fikarakaràna azy ianao. Koa satria miely patrana ara-jeografia sy ara-elektronika ny zanaka am-pielezan'i Amerika Latina, dia miha-hita tsikelikely any anaty boky sy amin'ny aterineto ny toromarika. Tsy voatery mahay teny Espaniola vao mahafantatra ny dingana arahana, araka izay hita ato amin'ity lahatsary eto ambany eto ity, nalaina tao amin'ny trano fisakafoanana Venezoeliana any Etazonia, izay hanazavàn'ireo sefo ny fomba fikarakaràna sy ny tantara ao ambadik'ilay sakafo :
Lahatsary iray, amin'ny teny Anglisy ihany koa, mampiseho ny fomba fanaovana “romeritos”— Sakafo Krismasy nentim-paharazana any Meksika. Any afovoany sy atsimon'i Meksika no tena ahitàna ny rometiros, ary mandritra ny fotoanan'ny Krismasy ihany no androsoana azy. Avy amin'ny anaran'ny zavamaniry any anaty ala hoe “romerito” no nakàna ny anarany, zavamaniry mitovy amin'ny epinaran-jazakely na romarin. Io zavamaniry io, ampiarahana amin'ny patsabe maina sy ovy ary ireo rehetra ireo afangaro amin'ny saosy ‘mole’ (sôkôlà masiaka) no anamboarana ilay sakafo.
Aparitaka betsaka ihany koa amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny alàlan'ny sary vazivazy ny Hallacas sy ny romeritos.
Vakin'ilay maribolana, “Manitrao toy ny romeritos sahady.” Sary miely patrana amin'ny aterineto.
Amin'ny tranga any Venezoela, ireo sary vazivazy sasany ihany koa dia mifandraika amin'ny olana ara-toekarena iainan'ny firenena :
Ao anatin'ny lahatsoratra: “Ho toy izao ny Hallacas amin'ity taona ity.” Sary vazivazy miely patrana amin'ny aterineto.
Ny Sopa paraguaya, na lasopinà mofo katsaka, fomba hafa fikarakaràna sakafo malaza fanao amin'ny fety any Paragoay amin'izao fotoana izao. Lafarinina katsaka, fromazy ary ronono no anamboarana ny sopa. Araka ny fanadihadiana nataon'ilay mpamoaka vaovao ao an-toerana ABC ( tsy misy ifandraisany amin'ilay tambajotranà fahitalavitra Amerikana), io sakafo io dia hita foana amin'ny ankamaroan'ny latabatra Krismasy :
Saika ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fitsapankevitra nataonay no nanaiky fa ny lasopy paragoaiana no iray amin'ny sakafo tsy tapaka amin'ny hariva mialoha ny Krismasy. Ny sasany amin'izy ireo dia manampahaizana manokana amin'ny fikarakaràna izany, ny sasany vao mianatra fotsiny[…] mandeha ny zava-drehetra rehefa afaka manandrana io “lasopy matavy” araka ny ilazàn'ny vahiny azy io ianao.
Fomba hafa fikarakaràna sakafo avy any amin'ny faritra atsimo no mety ho hita ao amin'ny haban-tranonkala ” The Real Argentina,” izay mety mamoaka sakafo krismasy vitsivitsy fanao any Arzantina sady hazavaina ao ny ampahany amin'ny fomba nentim-paharazana :
Ny fitsipika voalohany mifehy ny sakafo Krismasy any Arzantina dia : adinoy ny vorontsiloza ladobo ary ianaro ny manaiky ny Vitel Thoné […] Raha ny marina dia iray amin'ireo sakafo krismasy tena tian'ny any Arzantina ny Vitel Thoné, avy any Italia no niandohany, tahaka ireo mponina maro any Arzantina. Vita amin'ny peceto ( henan-janak'omby), nofenoina saosinà lamàtra, saosinà tamenak'atody sy menaka (maionezy) sy anchois. […] Marihina fa tsy hita mandritra ny taona ny peceto, fa rehefa tonga ny volana Desambra dia mampiakatra ny tahiriny ny tranombarotra lehibe.
Farany, zarain'ireo Latino any Etazonia ao amin'ny lahatsary iray “BuzzFeedRed” ny sakafo krismasy fanaon-dry zareo ary hazavainy ny sasany amin'ireo fomba nentim-paharazana izay tsy nialàn'ireo fianakaviany rehefa nifindra nankany avaratra izy ireo.